SIDEE LOOGU KAYDIYAA TOONTA JIILAALKA MAQAASI AMA QOLKA HOOSE SI HABOON? - WIXII MARTIDA
Miyuu suurtogal ah in lagu kaydiyo toonta hoose ee hoose iyo maqaasiinka jiilaalka kahor intaan la goosan?
Kaydinta toonta ee Maqsin waxaa loo tixgeliyaa habka ugu wanaagsan. Haddii Maqsin si fiican u diyaarsan, waxba kama horjoogsan doonaan toonta inay jiifaan ilaa guga, iyo mararka qaarkood ka hor goosashada cusub.
Dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa inay dhacaan sababtoo ah is-khilaafaadyada xaalad kasta oo kayd ah oo muhiim ah.
Si kastaba ha ahaatee, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu leeyahay dhammaan hababka iyo hababka aad abuuri karto xaaladaha ku habboon si loo ilaaliyo toonta.
Miyaan ku kaydi karaa toonta miiska ama qaybta hoose? Cadhada - doorasho fiican si loo ilaaliyo toonta. Khudaarta kale ee laga soo qaado beerta ayaa si weyn loogu kaydiyaa Maqsin. Garlic waa ka reeban tahay. Waxaa si fiican u haynaya guryaha bogsiinta, dhadhanka, muuqaalka.
Maqsin, toonku wuxuu socon karaa ilaa goynta xigta, haddii wuxuu buuxiyaa dhammaan shuruudaha ku saabsan heerkulka iyo qoyaanka.
Soo ogow haddii ay suurtagal tahay in lagu keydin karo toonta jiilaalka guriga marka laga eego maqaalkeena.
Sida loo dhigo toonta xilliga jiilaalka? Maqasyadu waa inay ku habboonaadaan xuduudaha qaarkood oo xaqiijin doona ammaanka toonta mudo dheer.
Sida kiiska ku keydinta khudaarta kale, xuduudaha ugu muhiimsan waa heerkulka iyo qoyaanka.
Soo koobidda dhammaan tilmaamayaasha muhiimka ah ee maqaasiinka, waxaan leenahay:
waa inuu ahaado diirimaad diiran. Heerkulku waa inaanay hoos u dhicin +0 digrii. Marka heerkulka subero, toonta laguma kaydin waqti dheer;
heerkulka heerkulka wanaagsan laga bilaabo +2 ilaa +5 ° C;
qoyaanku waa inuu gudaha ku jiraa laga bilaabo 50 ilaa 80%;
maqnaanshaha fungi iyo bakteeriyada jiran - waa arrin go'aamisa amaanka qashinka;
hawo wanaagsan. Joogta wareegga hawada cusub - fure u ah keydinta keydinta toonta iyo khudaarta kale ee Maqsin.
Inta badan maqaasiinka aan loo diyaarin kaydinta toonta iyo khudaarta kale xilliga jiilaalka. Waad hagaajin kartaa xitaa waxaad u baahan tahay:
Kormeer si taxaddar leh u baadhaya maqaasiinka ayaa ka jawaabi doona dhammaan su'aalaha ku saabsan yaraanta.
Marka la ogaado raadadka jiirka iyo cayayaanka, dheji dabka, samee habka ku habboon.
Marka la ogaado kaluun, nadiifi nalka haddii aaggu yar yahay. Haddii badi aqallada dhirta, derbiyada, roogga, iyo saqafka waxaa lagu dhajiyaa caaryaal, waxaa wanaagsan in la isticmaalo bamka qiiqa.
Fiximaha ku dheji hawo-qaadidhaddii ay yihiin.
Si aad u qabato nadiifinta Maqsin, diyaariso meel si ay u kaydiso toon.
Garlic, ka dib markii kala-soocidda aysan u gudbin xulashada kaydinta Maqsin, waxaad ku qallajin kartaa xawaashka ama qaboojiyaha qaboojiyaha guriga.
Deriska oo leh khudaar kale
Sidee loo kaydiyaa toonta xilliga jiilaalka ee hoose ee hoose ee khudaarta kale? Kaydinta wadajirka ah ee toonta leh khudaarta kale aan loo baahnayn. Gaar ahaan baradho, kaabajka, karootada iyo xididdo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tusaalayaal isku-dhafka guulaystay wadaagida kaydinta toonta leh basasha. Marka lagu daro xaqiiqda ah in lagu kaydin karo oo kaliya meel u dhow, laakiin sidoo kale weel isku mid ah.
Dhawaanshaha khudaarta kala duwan ee Maqsin waa lagama yaabo in laga fogaado. Sababtan awgeed, way ka fiican tahay in lagu celiyo toonta markaa. Sidaas awgeed waxaa loo kaydin doonaa si gooni ah khudaarta kale.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo keydiyo khudaarta sida karootada, dabacasaha ama basbaaska buunshaha ee miisaska iyo maqaasiinka boggeena.
Sida loo dhigo toonta Maqaasi xilliga jiilaalka? Sida kaydinta toon ee aqalka, iyo Maqsin ayaa leh fursado badan. Tixgeli ugu waxtarka badan.
Kaydinta sarifka kuuska - Ideal for maqaasiinka yar. Goobidda meel, ilaalin wanaagsan oo toon ah - faa'iidooyinka ugu weyn.
Sallaar, markaad dooranayso habka noocaas ah, ayaa ku dhex jira naqshadaha loogu talagalay afkoda. Wixii qallafsan labeen ama xadhig. Tufan ka daatay saqafka Maqsin.
Qalbig - Habka waa jiraa oo la xaqiijiyay. Qof kastaa wuxuu xusuustaa sida awoowga ay tuulada u dhajiyeen naylad qoryo leh iyagoo toonta dhoobada.
Habkani waa mid munaasib ah. Isaga fududayn iyo kharash yar ku khasbanaaday in ay mar labaad iyo mar kale ku soo celiyaan. Madaxda toonta ah waxay si adag u xidhaan nacnac ama naqshad sharoobada ah waxayna xirxiraan saqafka miiska.
Sidaas awgeed si fiican ayaa loo ilaaliyaa ma dhacdo on shelp ama dabaqa. Halkii laga heli lahaa alaabada nayladu si fiican u shaqeyn doonto mesh siinta khudaarta.
Sanduuqyada, sanduuqyada - isticmaal sanduuqyada iyo sanduuqyada tufaax ama kartoon. Waxa ugu muhiimsan waa in ay leeyihiin godadka hawada. Madaxda Garlic waxaa lagu dhejiyaa sanduuqyada ama sanduuqyada waxaana lagu kaydiyaa dabaqa ama roogagga Maqsinka.
Si loo hagaajiyo tayada ilaalinta toonta gubi kariyo gaaska laga bilaabo laba dhinac.
Waxaan soo bandhigi doonaa dareenka cajaladda fiidiyowga ah ee lagu ciribtiro xayiraadda toonta ee kaydinta Maqsin:
Garlic waxaa lagu kaydin karaa Maqaasi dhammaan jiilaalka, oo ku xiran dhammaan talooyinka lagu ilaalinayo heerkulka iyo qoyaanka:
sanduuqyada, sanduuqyada nolosha shelf ayaa si fudud u gaari kara 6 bilood;
ee shimbiraha, naqshadaha, shabakadaha - ku saabsan 5-6 bilood.
Xaaladaha qaarkood, toonta ayaa awood u leh inay been sheegto dheer. Waxay kuxirantahay fasalkeeda, nadiifinta habboon, diyaarinta iyo waxyaabo kale oo badan.
Sidaa darteed, dhulka hoostiisa (maqaasiinka) waxay u adeegtaa meel wanaagsan oo lagu kaydiyo toonta.
Haddii la taageerayo heerkulka la doonayo iyo qoyaanka, ma jirto bakteeriyada iyo caaryada, toonta waxay ku jiri doontaa jadwalka sanadka oo dhan.
Garlic ma aha dhirta ugu dhaqsaha badan marka loo eego kaydinta. Taasi waa sababta waxaa jira fursad kasta ku hayso qaybta hoose ee dhammaan jiilaalka.